ငါ FSX ၏ setting ထဲမှာ«ကို Preview DirectX ကို 10 »သေတ္တာကိုမတှေ့နိုငျပါသညျ။ ငါဘာလုပ်သင့်လဲ ? - Rikoooo
ငါ FSX ၏ setting ထဲမှာ«ကို Preview DirectX ကို 10 »သေတ္တာကိုမတှေ့နိုငျပါသညျ။ ငါဘာလုပ်သင့်လဲ ?
ပထမဦးစွာသင် FSX-SP2 သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားပြီစစ်ဆေးပါ။ အမှန်မှာထို« ကို Preview DirectX ကို 10 သင် SP2 patch ကို install လုပ်ပြီးလျှင်သို့မဟုတ်သင် FSX Acceleration သို့မဟုတ် FSX ရွှေသို့မဟုတ် FSX ရေနွေးငွေ့ Edition ကိုရှိပါက»သာပုံပေါ်ပါတယ်။